Maskaxdii Ka Dambeysay Dilka Madaxweynihii Haiti Oo La Shaaciyay – somalilandtoday.com
(SLT-Haiti)-Taliyaha booliska Haiti ayaa shaaca ka qaaday magaca qof uu sheegay inuu amray dilkii madaxweynihii Haiti Jovenel Moise.
Sarkaal hore uga tirsanaa wasaaradda cadaalada Haiti oo la yidhahdo oseph Felix Badio ayaa la sheegay in calooshood u shaqeystayaasha Colombia uu ku amaray inay khaarajiyaan madaxweynaha ka dib markii uu ugu caga jugleeyay inuu xidhayo.
Janaraal Jorge Luis Vargas ayaa sheegay Joseph Felix Badio uu markii hore u sheegay laba ka mid ah askartii hore ee Colombia oo mas’uul ka ahaa calooshood u shaqeystaasha Colombia inay soo xidhaan madaxweyne ovenel Moise.
Mr Badio waxa uu ka mid ahaa dhowr qof oo liiska madow ugu jiray booliska Haiti. Waxaa lagu soo eedeeyay dil, abaabulka saadka, iibsashada gawaadhida iyo isku dubaridka howlgalka kooxda dadka dila.